April 2019 - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
သင့်ရဲ့ လက်ရှိ စမတ်ဖုန်းကို ကိုင်နေတာ နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုရင်တော့ ဟောင်းနွမ်းတဲ့ ပုံပန်းသွင်ပြင်ဖြစ်နေမှာပါ။ သင့်ရဲ့ ဖုန်းအဟော...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:42 PM No comments:
Android Phone လေးလံရခြင်းအကြောင်းအချို့
Memory Stroage အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ Memory stroage လို့ပြောလိုက်ရင် အရင်ဆုံးအလွယ်ပြေးမြင်လို့ရတာ SD Card ပါ ။ တကယ်တော...
Android Phone လေးလံရခြင်းအကြောင်းအချို့ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:41 PM Rating:5Memory Stroage အကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ Memory stroage လို့ပြောလိုက်ရင် အရင်ဆုံးအလွယ်ပြေးမြင်လို့ရတာ SD Card ပါ ။ တကယ်တော...
၁။ ကိုယ့်ရဲ့ ထုတ်ကုန်အားလုံးကို update လုပ်ပါ Laptop တွင် operating system နှင့် anti-virus software နောက်ဆုံးဗားရှင်းများကို အသုံ...
ခရီးသွားများ သိထားသင့်သည့် မိုဘိုင်းလုံခြုံရေး နည်းလမ်း (၁၀) ခု Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:41 PM Rating:5၁။ ကိုယ့်ရဲ့ ထုတ်ကုန်အားလုံးကို update လုပ်ပါ Laptop တွင် operating system နှင့် anti-virus software နောက်ဆုံးဗားရှင်းများကို အသုံ...
Password မလိုဘဲ Google အကောင့်များကို သင့်ဖုန်းဖြင့် Sign In ၀င်နည်း
Google က သင့်အကောင့်များကို Sign In ၀င်တဲ့အခါမှာ Password များ ရိုက်ထည့်ရတဲ့ အလုပ်ရှုပ်မှုကို သက်သာစေဖို့ စွမ်းဆောင်ချက် အသစ်တစ်ခုကို ...
Password မလိုဘဲ Google အကောင့်များကို သင့်ဖုန်းဖြင့် Sign In ၀င်နည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:40 PM Rating:5Google က သင့်အကောင့်များကို Sign In ၀င်တဲ့အခါမှာ Password များ ရိုက်ထည့်ရတဲ့ အလုပ်ရှုပ်မှုကို သက်သာစေဖို့ စွမ်းဆောင်ချက် အသစ်တစ်ခုကို ...
စမတ်ဖုန်းမှာ မလိုအပ်တဲ့ Apps များထည့်ထားခြင်းဟာ Storage ကုန်စေသလို ဖုန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဘက်ထရီ သက်တမ်းကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဘက်...
Android မှာ မသုံးသင့်တဲ့ App ငါးမျိုး Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:39 PM Rating:5စမတ်ဖုန်းမှာ မလိုအပ်တဲ့ Apps များထည့်ထားခြင်းဟာ Storage ကုန်စေသလို ဖုန်းရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဘက်ထရီ သက်တမ်းကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဘက်...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:39 PM No comments:
ဖုန်းသုံးနေရင်း ပူလာရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် ဖုန်းပြောနေရင်း ဒါမှမဟုတ် Game ဆော့နေရင်း ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်း ဖုန်းဘတ္ထရီပူလာတတ်တာ ကြုံဖူးကြပါမယ်။ ဖုန်းကို အသုံးမျ...
ဖုန်းသုံးနေရင်း ပူလာရင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:31 PM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် ဖုန်းပြောနေရင်း ဒါမှမဟုတ် Game ဆော့နေရင်း ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်း ဖုန်းဘတ္ထရီပူလာတတ်တာ ကြုံဖူးကြပါမယ်။ ဖုန်းကို အသုံးမျ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:31 PM No comments:
သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်မိနေတဲ့ သင့်ဖုန်းကိုပျက်ဆီးသွားနိုင်တဲ့ အချက်များ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် နေ့စဉ်သုံးစွဲနေတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေဟာ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့တော့ တရွေ့ရွေ့ပျက်ဆီးနေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဂရုမစိုက်ပဲလုပ်ဆော...
သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်မိနေတဲ့ သင့်ဖုန်းကိုပျက်ဆီးသွားနိုင်တဲ့ အချက်များ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:24 PM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် နေ့စဉ်သုံးစွဲနေတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေဟာ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့တော့ တရွေ့ရွေ့ပျက်ဆီးနေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဂရုမစိုက်ပဲလုပ်ဆော...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:24 PM No comments:
သင့်ရဲ့ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာတွေကို အသစ်အတိုင်း သန့် ရှင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်း ( ၆ ) ခု
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် ဖုန်တွေက သင့်ကွန်ပြူတာအတွက်အဓိကရန်သူတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လောက်ပဲသန့်သန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ထားလည်းပဲ လေထဲက ...
သင့်ရဲ့ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာတွေကို အသစ်အတိုင်း သန့် ရှင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်း ( ၆ ) ခု Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:21 PM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် ဖုန်တွေက သင့်ကွန်ပြူတာအတွက်အဓိကရန်သူတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လောက်ပဲသန့်သန့်ရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ထားလည်းပဲ လေထဲက ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:21 PM No comments:
မြန်မာစာရေးဆရာများ၏ စာပေဟောပြောပွဲများကိုဖုန်းပေါ်တွင်အသင့်တင့်နားစင်လိုသူများအတွက်App လေးပါ fb ကထက်အများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်။လိုချင်ရင်တော့ေ...
စာပေ ဟောပြောပွဲများဆော့ဝဲ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 6:39 PM Rating:5မြန်မာစာရေးဆရာများ၏ စာပေဟောပြောပွဲများကိုဖုန်းပေါ်တွင်အသင့်တင့်နားစင်လိုသူများအတွက်App လေးပါ fb ကထက်အများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်။လိုချင်ရင်တော့ေ...
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း နှင့် လမ်းညွှန်များ၊ လမ်းအမှတ်အသားများကို လေ့လာနိုင်မယ့်ဆော့ဖ်ဝဲလ် - Myanmar Driver Handbook v1.2.2 APK [LATEST]
ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း စံပြအမေးဖြေ နှင့် လမ်းညွှန်များ၊ လမ်းအမှတ်အသားများ ကို အတူတကွ လေ့လာနိုင်ရန် နှင့် ယာဉ်မောင်း လိုင်စင် စာမေးပွ...
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း နှင့် လမ်းညွှန်များ၊ လမ်းအမှတ်အသားများကို လေ့လာနိုင်မယ့်ဆော့ဖ်ဝဲလ် - Myanmar Driver Handbook v1.2.2 APK [LATEST] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:53 PM Rating:5ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း စံပြအမေးဖြေ နှင့် လမ်းညွှန်များ၊ လမ်းအမှတ်အသားများ ကို အတူတကွ လေ့လာနိုင်ရန် နှင့် ယာဉ်မောင်း လိုင်စင် စာမေးပွ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 7:53 PM No comments:
မြန်မာအလံနဲ့ပုဂံကီးဘုတ် - Myanmar Flag Bagan Keyboard 1.0 APK for Android [LATEST]
အမျိုးများအတွက် မြန်မာအလံနဲ့ လန်းနိုင်တဲ့ ပုဂံကီးဘုတ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မူရင်းဖျက်စရာမလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ... Click here to dow...
မြန်မာအလံနဲ့ပုဂံကီးဘုတ် - Myanmar Flag Bagan Keyboard 1.0 APK for Android [LATEST] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:51 PM Rating:5အမျိုးများအတွက် မြန်မာအလံနဲ့ လန်းနိုင်တဲ့ ပုဂံကီးဘုတ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မူရင်းဖျက်စရာမလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ... Click here to dow...
ကရင်အလံပုဂံကီးဘုတ် - Kayaing Flag Bagan Keyboard 1.0 APK for Android [LATEST]
မိတ်ဆွေများအတွက် ကရင်အလံနဲ့ပုဂံကီးဘုတ်အလန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မူရင်းဖျက်စရာမလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Download လုပ်ချင်ရင်တော့ အောက်ပါ ...
ကရင်အလံပုဂံကီးဘုတ် - Kayaing Flag Bagan Keyboard 1.0 APK for Android [LATEST] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:11 PM Rating:5မိတ်ဆွေများအတွက် ကရင်အလံနဲ့ပုဂံကီးဘုတ်အလန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မူရင်းဖျက်စရာမလိုဘဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Download လုပ်ချင်ရင်တော့ အောက်ပါ ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 7:11 PM No comments:
သီချင်းနှင့်ဂစ်တာလက်ကွက်ကီးများ v2.5.0 APK for Android [LATEST]
သီချင်းစိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့ ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုတာ နှစ်သက်သူတွေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်း အယ်လ်ဘမ်ပေါင်း ၂၂ ခုပါဝင်ပြီး သ...
သီချင်းနှင့်ဂစ်တာလက်ကွက်ကီးများ v2.5.0 APK for Android [LATEST] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 5:37 PM Rating:5သီချင်းစိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့ ဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုတာ နှစ်သက်သူတွေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်း အယ်လ်ဘမ်ပေါင်း ၂၂ ခုပါဝင်ပြီး သ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 5:37 PM No comments: